Nzira yekutengesa sei kutengesa kwangu kuAmazonyo nekodzero yakakosha yechinhu chekushandisa?
Hapana chikonzero chekutaura kuti pane zvakasiyana-siyana zvakasiyana siyana zvekutengesa ecommerce nekuongorora zvishandiso zvinowanika mukusununguka kuIndaneti. Ndicho chikonzero nei kazhinji kacho kusarudza mhando dzakanaka dzemapurogiramu kuAmazon, kunze kweshoko guru rekushandisa shanduro, rinova basa rakaoma chaizvo. Kunyange zvakadaro, pane zvishomanana zvinoshandiswa-purogiramu software yakaratidza ini ndinogona kukurudzira kushandisa kunze uko. Pasi pandinoenda kuzokuratidzai zvimwe zvandinenge ndasarudza zvekutanga kutengesa kuma Amazon ane keyword ranking tool iyo inokodzera zvaunoda uye zvinangwa zvakanakisisa.
Yokutanga mahara Amazon keyword tool tool Ndinoda kutaura nezvaScientific Seller, zvichida yakasiyana zvikuru pakati pemamwe marudzi anozivikanwa ye software software zvinonyanya kushandiswa nemashoko ekutsvakurudza. Iwe unofara nekumirira kwemaawa kuti uwane mhinduro dzakagadziriswa pakupedzisira dzakaratidzwa pahwindo rako here? Kana zvichiitika saizvozvo, Scientific Seller inogona kuva yako yekugadzirisa sarudzo, sezvo iyi Amazon mazita ezvinyorwa zvishanduri iri kupa kupa-nguva-mazano mazano pakarepo-inongoramba ichingokupa shreds yakawanda yekunzwisisa uye mazano kunze kwekuti iwe uchida kuti idzime uye ipe "pause" "Bhatani - az small business valuation services.
Inoshanda chaizvo chaizvo - ingotanga nokuzadza imwe kana mbiri inonyanya kutsvaga mazwi mubhuri yekutsvaga. Zvadaro, sarudza chaiwo mushamba muAmazon iwe unoda kuwana keyword data yakagadzirirwa. Uye iwe unogona kubatsirwa kubva muhuwandu hwayo-mafuta pasina kubhadhara penny - Ndinoreva kuti mazano anokosha mazano anowanika kuAmazambique kunyange nechekuedzwa uye pasina zvikanganiso. Uye iwe unogona kuchengetedza urongwa hwekuwanikwa kwako kwekupedzisira chero nguva yaunoda, somuenzaniso, kudzoka kana kuigadzirisa gare gare. Zvose zvaunoda kuwana dare rako rekutsvakurudza rakatumirwa muSVV faira ndeyokupfuura nzira yekunyora-shandiswa kwekambani itsva yekusununguka neScientific Seller. Cherechedza, zvisinei, kuti iyo chete inopera yehupfumi hwekutsvaga kwayo inoshandiswa zvishanu chete zuva rega rega. Izvozvo zvingaratidzika sezvisina kukwana pakutarisa kwekutanga. Asi uchitarisa kuti iwe uchange uine maitiro evhiki kuitira kuwedzera mapurogiramu ako ePCC, kuchinja mazita, nekudaro-zvakabatsiro zveiyi Amazon yechitubu chekutsvaga zvinyorwa zvichinyatsobuda kunze kwekugoverwa kwakashata. Sonar
Sonar inonyanya kushandiswa uye inobudirira yezvinyorwa zvitsvakurudzo chekutsvakurudza, iyo inotakura database yakakura yepamusoro pemamiriyoni makumi manomwe emazwi makuru. Kana ndiri ini, ndakawana makona akasimba epurogiramu iyi pandakanga ndichiri kushanda kuti ndivandudze huwandu hwehuwandu hwemashoko angu ezvinyorwa zvangu, uyewo nekugadzirisa zvangu zvekare PPC kuparidzira mishandirapamwe. Kutorwa kazhinji, Sonar inogona kukubatsira nemhando nhatu dzakasiyana dzemashoko ekutsvaga anowanika kuburikidza nematengesi mashanu emakona pasi pose.
Uye hazvina kuoma zvachose kushandisa iyi kiyi yekodhi yekombiyuta. Yokutanga tsvakurudzo yekutsvaga yakagadzirirwa kusonganidza izwi rinokosha nehuwandu hwemashoko epamusoro ekutsvakurudza anonyanyozivikanwa pakati pevashambadziri vapenyu. Nenzira iyo, iwe unogona kugara uchiona zvakanyanya kutaridzirwa kutsvaga vhizha kune chero chinhu chipi zvacho chaunoda. Chechipiri sarudzo inokurumidza kutsvaga, iyo inogona kukubatsira kuwana zvakanakisisa zvakakodzera mazwi uye LSI keywords - pakupedzisira, kuwedzera runyora rwezvimwe zvinyorwa zvemashoko. Uye danho rekupedzisira rinowanika neSaar riri kuzadza mune zvingave zvakakosha mazwi makuru ekupedza zvakakwana tsvakurudzo yakazara. Kuita kudaro, unogona kuunza mikana yakawanda yakakosha sezvaunoda, kunze kwekuuya nekutsvaga kwekutsvaga kwemigwagwa inogona kuve yakatarisirwa kwenguva yakareba.